Le isitena izitena ezinzileyo isivuno eliphezulu zabo ngoomatshini - China Yinzhou Nuoya
Le isitena izitena mshini ukusetyenziswa SLAG, SLAG, nothuthu, lekalika, isanti, igrabile, isamente kwakunye nezinye izinto, indlela yenzululwazi, ukuxuba ngamanzi, nangokwenziwa izitena cofa Umatshini koxinzelelo oluphezulu izixhobo ngomatshini ngezitena nesamente, ibloko umngxuma okanye izitena indlela ezimibalabala. Le izixhobo Mianshaozhuanji nto wonke umntu ethetha ngayo, oko kukuthi ephuma kwimveliso izitena zesamente okanye iibhloko ezibuhlazarha, ngaphandle sintering, kunye omisa mfutshane kungaba mveliso. Kunokuthiwa ukuba utyalo-mali ngaphantsi, isiphumo ngokukhawuleza.
Izitena izitena yokwenza noomatshini ezine eCwangciswe, lomenzi liyatshona isikhokelo kwisingxobo, ixesha elide.
Izitena yokwenza izitena noomatshini ngenkani imveliso isakhiwo yolunye emboxo, amandla aphezulu, demoulding agudileyo, izinga eliphezulu kweemveliso ezigqityiweyo. Ingalo swing isetyenziselwa ukudibanisa isilinda ukukhululwa ezimbini ukuphumeza isiphumo sokuGcina ungqamaniso izinzile. Engasentla kunye nezikhundla asezantsi intloko xi ibhokisi sokubumbela babonelelwa ngentonga Screw isixhobo umda, ukuchaneka ukubekeka ukuyondelelana ukuphakama imveliso ezilungileyo. Brick Isitena umsebenzi: ukutshintshwa sande unako ukuvelisa izitena umgamgatho, izitena aneentunja, izitena ezibuhlazarha, yezitena yabahambi. Izitena izitena kusenziwa noomatshini: ulawulo ze desktop yakho, ipleyiti oluzenzekelayo, oluzenzekelayo kwamanye amazwe, udini yiHydraulic, ugcine eqela labasebenzi.